NSCA စီးပွားရေး & ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံအတွင်းမှာတော့စပွန်ဆာ FSR အမည်များကို Twitter ပြိုင်ပွဲတွင်၏ Winners - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » NSCA စီးပွားရေး & ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံအတွင်းမှာတော့စပွန်ဆာတွစ်တာပြိုင်ပွဲတွင်၏ FSR အမည်များ Winners
NSCA စီးပွားရေး & ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံအတွင်းမှာတော့စပွန်ဆာတွစ်တာပြိုင်ပွဲတွင်၏ FSR အမည်များ Winners
Woodland ပန်းခြံ, NJ - FSR, audio / ဗီဒီယိုအတွက်ထုတ်ကုန်, ပညာရေး, ဧညျ့, အစိုးရ, နှင့်ဘာသာရေးစျေးကွက်ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ထိုအောင်မြင်သောတွစ်တာပြိုင်ပွဲတွင် Tampa အတွက်မကြာသေးမီ NSCA စီးပွားရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံကာလအတွင်းကမကထကုမ္ပဏီ၏ဆုရရှိသူကိုကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် , FL ။ အလုပ်အမှုဆောင်-Level ပညာရေးများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အသိသာဆုံးပလက်ဖောင်းဖြစ်လာနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကခေါင်းဆောင်များအဘို့အ networking သောညီလာခံ, ပုံပြင်များဝေမျှသည်အခြားခေါင်းဆောင်များကနေလေ့လာသင်ယူနှင့်အကြောင်းကြားရန်နှစ်စဉ်အတူတကွ 17 အမှုဆောင်အရာရှိထက်ပိုရောက်စေဖို့အတိတ်ကာလ 300 နှစ်အတွင်းစိုက်ပျိုးထားပါတယ် နည်းပညာဘက်လျက်နှင့်ဝန်ထမ်းများကိုလှုံ့ဆော်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကို။ social media ဖြစ်ရပ်မှာကြီးထွားလာရှိနေခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ Sandri, FSR သမ္မတကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဆုရရှိသူ, On-The-ပျံသန်းသူမကဘာများကောင်းမကောင်းအပေါ်အတှေးအသူမ၏အများကြီးအပါအဝင်3မူရင်း tweets, ထုတ်လုပ်သူအားလုံးစနစ်များနှင့် Sphere 145 ကနေပထမဦးဆုံးအရာအရပျ tweeter Kourtney Govro, ပါဝင်သည် ထိုအဖြစ်အပျက်မှာကြားနာခြင်းနှင့်ကြုံနေရ, ကိုမြင်လျှင်။ သူမသည်တစ်ဦး $ 100 American Express လက်ဆောင်ကဒ်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယနေရာ $ 25 ဆုကြေးဇူးကိုလက်မှတ်များ၏ဆုရရှိသူအချို့ကမ်းလှမ်း 140 မူရင်း tweets ထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်သူကို IMS နည်းပညာကနေဟာသသူ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူစကားများကိုလှိုင် 120 မူရင်း tweets ထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်သူကိုအဆင့်မြင့် AV စနစ်ကနေဆရာယောဟနျဂရီး, နှင့်မိုက်ကယ် Shinn များမှာ အထင်ကြီးညီလာခံထိုးထွင်းသိမြင်။
"FSR စိတ်ကူးများနှင့် NSCA ရဲ့စီးပွားရေးနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံကဲ့သို့သောအရေးပါသောစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. သွက်အတွေးများနှင့်စကားပြောဆိုမှုများ၏ခွဲဝေမှုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်တဲ့ပြိုင်ပွဲစပွန်ဆာဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ်" ဟု Sandri ကဆိုသည်။ "400 ညီလာခံကနေခန့်မူရင်း tweets ပေါင်းထက်ပိုပြီးနှင့်အတူကျွန်တော်ဟာသတစ်ခုမီးတောက်နှင့်အတူသူအ thoughtfully နှင့်မကြာခဏကြိမ်, ဤလူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအနည်းဆုံးပြော, သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်, ထိုအဖြစ်အပျက်မှမိမိတို့တွေ့ကြုံ shared ။ "
tweets တွမ် LeBlanc, Editor ကို-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Integrated မဂ္ဂဇင်းသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SMB) အစေခံသောသူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစည်း၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းထံအပ်နှံပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေစျေးကွက်အားဖြင့်စာရင်းပြုစုထားသောခဲ့ကြသည်။
1981 ၌တည် FSR, ကျယ်အသံ / ဗီဒီယို signal ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများဖြေရှင်းချက်၏အမျိုးမျိုး, datacom, ပညာရေး, ဧညျ့, အစိုးရနှင့်ကြမ်းပြင်, မြို့ရိုး, စားပွဲ, မျက်နှာကျက်ဆက်သွယ်မှုသေတ္တာများအပါအဝင်ဘာသာရေးစျေးကွက်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ထုတ်လုပ် Interface, ဖြန့်ဖြူးချဲ့စက်များ, matrix ကို switcher, ချောမွေ့စွာ switcher နှင့် HDBaseT & CAT-X ကို signal ကိုပေးပို့ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝလိုင်းကို။
အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုစွမ်းအင်စတားအဖော်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဂြိုဟ်ထိန်းသိမ်းရန်၎င်း၏နက်ရှိုင်းသောကတိကဝတ်သရုပ်ပြ 2009 ၏အမေရိကန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Reinvestment အက်ဥပဒေကိုလိုက်နာရမည်။ FSR ကျွမ်းကျင်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပညာရှင်များနှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်တိုင်းပြည်တလျှောက်လုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 24 /7နည်းပညာနှင့်အရောင်းထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက: www.fsrinc.com.
FSR ဆက်သွယ်ရန်: ဇန်နဝါရီ Sandri
973-785-4347 • [အီးမေးလျ protected]
စာနယ်ဇင်းဆက်သွယ်ရန်: ကန္တာရမွန်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး & Advertising ကြော်ငြာ
845-512-8283 • Mailto:[အီးမေးလျ protected]
Medialooks သည် eSports Giant ESL ကို Video Transport Solution ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည် - အောက်တိုဘာလ 18, 2019
FSR ၏ Smart-Way စနစ်သည် NECA 2019 အတွင်းတွင်ပြပွဲကိုရပ်လိုက်သည် - အောက်တိုဘာလ 15, 2019
Kevin Joyce သည် TAG Video Systems မှစီးပွားဖြစ်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည် - အောက်တိုဘာလ 15, 2019
ဆက်သွယ်မှုသေတ္တာ FSR NSCA စီးပွားရေး & ခေါင်းဆောင်မှုညီလာခံ တွစ်တာ Winner	2015-03-31
ယခင်: Shotoku အာဂျင်တီးနားထုတ်လွှင့်အမရေိတီဗီရန် Landmark ရောင်းရန်ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Bexel Fujinon Cabrio မှန်ဘီလူးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ Inventory တိုးချဲ့